Ukuphumelela amabhaso Umphathi Jikelele omtsha uxhasa iRitz-Carlton, Bali
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukukhutshwa kweendaba » Ukuphumelela amabhaso Umphathi Jikelele omtsha uxhasa iRitz-Carlton, Bali
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Ukukhutshwa kweendaba • Resorts • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
URitz-Carlton, uBali wamkele uJohn Woolley njengoMphathi Jikelele omtsha
Indawo yokuphumla elunxwemeni, iRitz-Carlton, eBali yamkele uJohn Woolley njengoMphathi Jikelele omtsha.
Ukuza namava angaphezulu kweminyaka engama-20 kunye noMarriott International kwindima yakhe entsha, umsebenzi odumileyo kaJohn umthathe wamsa kwihlabathi jikelele, kutshanje esiqithini sikaThixo ngo-2015. NjengeManejala Jikelele kwiNkundla nguMarriott Bali Seminyak Resort ukususela ngo-2015 ukuya ku-2019, yena Inandiphe impumelelo engathethekiyo, kwaye yamkelwa 'njengoMphathi Jikelele weNkundla' ngo-2018, kunye 'noMphathi Jikelele weNtengiso ye-APAC yoNyaka' ngo-2016.
Kuluzuko kunye novuyo ukuhlala kwindawo ethandwa kangaka eBali. Esi siqithi silikhaya lam lokwenyani kule minyaka mine idlulileyo. Ndilithanda kakhulu icandelo lokundwendwela apha eBali, ke ndiyalivuyela eli thuba lokusebenzisa umbono wam wobuchule kunye namava ehlabathi kuzo zonke iinkalo zeli ziko, kwaye ndilizise kwinqanaba elilandelayo lempumelelo. Ndijonge ngakumbi ekusebenzisaneni namaLungu aHloniphekileyo na URitz-Carlton Bali ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu zinamava amahle eeholide kwaye sithatha iinkumbulo zasekhaya ezihlala ubomi bonke, utshilo uJohn.
Inkokeli eguqukayo, eguqukayo kunye neqhutywa sisiphumo, iindima zobunkokeli zikaJohn ziye zaneendlela ezininzi, kubandakanya ukuthengisa kunye nentengiso, ukusebenza kunye neqela lengingqi, kumazwekazi amane. Amagqabantshintshi emisebenzi abandakanya izikhundla zoMlawuli weNdawo yeNtengiso kunye neNtengiso, uMazantsi eAsia kunye neCaribbean. Ukuqalisa ngempumelelo i-injini yokuthengisa esezantsi kwi-European Convention Network exhasa MarriottIihotele ezinkulu zamaqela eYurophu ngaphambi kokuba ziye kulawulo ngokubanzi eBali.
I-US kunye ne-UK kuzwelonke uJohn yintshatsheli yenkcubeko ejolise kubathengi kunye nenkcubeko enxulumene nayo, amaxabiso amenza ukuba alungele iRitz-Carlton Bali, eziqhayisa ngesiqubulo sophawu lwethu lwamanenekazi kunye nabanumzana abakhonza amanene namanenekazi.